छाती हाम्रो, मर्जी अरुको ! कहिल्यै मैले मेरा स्तन मेरा अनुसार राख्न पाइनँ -बिगुल न्यूज
छाती हाम्रो, मर्जी अरुको ! कहिल्यै मैले मेरा स्तन मेरा अनुसार राख्न पाइनँ
असार ०७, २०७४ NK-Bigul Media
एजेन्सी – म मोटी केटी थिएँ । त्यसैले सायद मेरा स्तन मेरै उमेरकी केटी भन्दा चाँडै विकसित भए । ११ वर्षको उमेरमा मलाई एउटा ब्राको जरुरी भयो । मेरी आमाले सदा यसलाई पहिरन अह्रानुभयो । अहिले पनि आमा त्यसरी नै कराउनहुन्छ, ‘सेप खराब होला ।’
अब हाम्रो स्तन हाम्रो रहेन, पवित्रता, पाप वा लाजका कारण । मेरो स्तनका लागि सधैं आमाको अनुमति जरुरी भयो । कहिल्यै मैले मेरा स्तन मेरा अनुसार राख्न पाइनँ । मेरा बा र छिमेकीको उपस्थितिमा मैले ब्रा पहिरनै पर्ने भयो । उनीहरुका अघि म कहिल्यै भित्र ब्रा नलाएर बाहिर अर्कै लुगाका साथ पनि उपस्थित हुन सकिनँ ।
म कल्पना गर्थें कि मेरा सन्तान कस्ता होलान् ? जब मेरा सन्तान हुन्छन् उनीहरु मेरो छातिसँग जोडिएका स्तनको दूध पिउँछन् । उनीहरुले स्तन गिलो बनाइदिए वा दाँतले टोकेर, नंग्राले चिथोरेर निशान बनाइदिए के होला ! किन स्तनका बारेमा पुरुषको कल्पना पनि यसैगरी उनीहरुकी आमाका साथ जोडिएर सुरु हुँदैन ?
वास्तवमा यो पनि भनिन्छ ब्लाउजको प्रचलन आउनुअघि महिला माथिको कपडा पहिरदैनथे । महिला टपलेस रहेकोमा लाज पनि मान्दैनथे । प्राचीन मूर्ति हेर्नुहोस् एकपल्ट, तपाईंहरु थाहा पाउनुहुनेछ म के भन्न खाेज्दैछु ?
१८–१९औं शताब्दीमा महिलालाई स्तन ढाक्न मनाही थियो । ब्राह्मण छाडेर कोही पनि हिन्दू महिला आफ्ना स्तन छोप्ने बारेमा सोच्दैनथे– यस्तो गर्दा शालिनता गुमाएको आरोप खेप्नुपथ्र्याे । उच्च जातिकी महिला भने एउटा सेतो कपडाले स्तन छोप्न सक्थे । १९ औं शताब्दीसम्म भारतको त्रावणकोर, कोचीन । मालाबारमा कुनै महिलालाई आफ्ना स्तन छोप्ने अनुमति थिएन । अय्या वैजुंदरकोअ सर्थनमा केही समुदायले महिलाले पनि माथिल्लो शरीरमा समेत कपडा लगाउन पाउनुपर्ने भनेर लडाइ नै गरे । यसको प्रतिरोधमा १८१८मा उच्च जातिकाले हमला नै गरेका थिए ।
यो सामग्री श्रीमइ पियु कुन्दु उनले नियमित लेख्ने आईचोक.इनबाट नेपाली रुपान्तरण गरिएको हो । फरक मत राख्ने रुचाउने लेखिका कुन्दु उपन्यासकार समेत हुन् ।
प्रकाशित : बुधबार, असार ०७, २०७४१८:१६
गितकार खड्ग विवश विसिको गिति संग्रह याद–२ को बिमोचन
परदेशी श्रीमानको चिठी
छोरी पिटेर बुहारी तर्साउने सासु
म डाक्टर गोविन्द केसी
पूर्वराजदुत उपाध्यायद्वारा ‘छाइदेउ ए हजुर मनमा’ सार्वजनिक
३ महिना अगाडि NK-Bigul Media
९ महिना अगाडि NK-Bigul Media
११ महिना अगाडि NK-Bigul Media